Ukohlwaywa kwesiqulatho soMxholo: Intsomi, iNyaniso, kunye neeNgcebiso zam | Martech Zone
Kwisithuba seminyaka elishumi, uGoogle ebesilwa nenkolelo yesohlwayo somxholo ophindiweyo. Kuba ndisaqhubeka nokufaka imibuzo kuyo, ndicinge ukuba kufanelekile ukuxoxa apha. Okokuqala, masixoxe ngeverbiage:
Yintoni i Umxholo ophindwe kabini?
Umxholo ophindiweyo ngokubanzi ubhekisa kwiibhloko zomxholo ngaphakathi okanye kwimimandla ehambelana ngokupheleleyo nomnye umxholo okanye ofana ngokufanelekileyo. Kakhulu, oku akuyikhohlisi kwimvelaphi.
Google, thintela umxholo ophindwe kabini
Yintoni Isohlwayo soLuhlu lweMpazamo?
Isohlwayo sithetha ukuba indawo yakho ayisekho kuluhlu kwiziphumo zophando zizonke, okanye amaphepha akho ancitshiswe ngokumangalisayo kudweliso lwamagama athile aphambili. Akukho nanye. Ixesha. uphando wayichitha le ntsomi ngo-2008 okwangoku abantu basaxoxa ngayo nanamhlanje.
Masiyibeke ebhedini kanye le nto, bantu: Akukho nto ithi "sohlwaywa umxholo womxholo." Ubuncinci, hayi ngendlela abantu abaninzi abathetha ngayo xa besitsho.
UGoogle, ukungqinisisa isohlwayo esiPhindiweyo soMxholo
Ngamanye amagama, ubukho bomxholo ophindiweyo kwindawo yakho abuzukufumana ukuba indawo yakho yohlwaywe. Usenokubonisa kwiziphumo zokukhangela kwaye usenobume obuhle kumaphepha anomxholo ophindiweyo.
Kutheni le nto uGoogle efuna ukuba uthintele uMxholo ophindwe kabini?
UGoogle ufuna amava omsebenzisi aphezulu kwiinjini yokukhangela apho abasebenzisi bafumana khona ulwazi lwexabiso ngonqakrazo ngalunye lweziphumo zokukhangela. Umxholo ophindiweyo ungawonakalisa loo mava ukuba iziphumo ezilishumi eziphezulu kwiphepha lesiphumo seinjini yokukhangela (SERP) wayenomxholo ofanayo. Iya kuba yinkxalabo kumsebenzisi kwaye iziphumo zenjini yokukhangela ziya kutyiwa ziinkampani ze-SEO ze-blackhat ngokwakha nje iifama zomxholo ukuze zilawule iziphumo zophando.
Umxholo ophindiweyo kwindawo leyo ayisosizathu sokwenza into kuloo ndawo ngaphandle kokuba kubonakala ngathi injongo yomxholo oyimpinda kukukhohlisa kwaye usebenzise iziphumo ze-injini yokukhangela. Ukuba indawo yakho inengxaki yokuphinda umxholo ... senza umsebenzi olungileyo wokukhetha uhlobo lomxholo ukubonisa kwiziphumo zethu zophando.
Google, kunqande ukuyila iikopi zomxholo
Ke akukho sohlwayo kwaye uGoogle uya kukhetha uguqulelo alubonisayo, kutheni ke kufuneka thintela umxholo ophindiweyo? Ngaphandle kokuba wohlwaywa, wena UCanzibe kusenzakalisa amandla akho okuba ubekwe ngcono. Nasi isizathu:
UGoogle kunokwenzeka ukuba aye bonisa iphepha elinye kwiziphumo… Onegunya elifanelekileyo nge-backlinks kwaye ke uya kufihla ezinye kwiziphumo. Ngenxa yoko, iinzame ezibekwa kwamanye amaphepha omxholo ayimpazamo yinkcitho xa kufikwa kwinqanaba lokukhangela injini.
Uhlobo lwephepha ngalinye luxhomekeke kakhulu kwi- ii-backlinks ezifanelekileyo kubo kwiindawo ezingaphandle. Ukuba unamaphepha ama-3 anomxholo ofanayo (okanye iindlela ezintathu kwiphepha elifanayo), unokuba ne-backlinks kwiphepha ngalinye kunokuba zonke i-backlink zikhokelela kwelinye lazo. Ngamanye amagama, wenzakalisa amandla akho okuba nephepha elinye eliqokelela zonke i-backlinks kunye nenqanaba elingcono. Ukuba nenqanaba elinye lephepha kwiziphumo eziphezulu kubhetele kunamaphepha ama-3 akwiphepha 2!
Ngamanye amagama… ukuba ndinamaphepha ama-3 anemixholo ephindiweyo kwaye ngalinye linama-backlink ama-5 lilinye… alizukuma kwinqanaba elinye kunye nephepha elinye elinama-backlink ali-15! Umxholo ophindiweyo uthetha ukuba amaphepha akho ayakhuphisana kwaye angabenzakalisa bonke endaweni yokubeka iphepha elinye, ekujoliswe kulo.
Kodwa sinemixholo ephindiweyo yamaphepha, ngoku yintoni?!
Kungokwemvelo ukuba nomxholo ophindwe kabini kwiwebhusayithi. Njengomzekelo, ukuba ndiyinkampani ye-B2B eneenkonzo ezisebenza kumashishini amaninzi, ndinokuba namaphepha ajolise kumzi-mveliso wenkonzo yam. Uninzi lweenkcazo zenkonzo, izibonelelo, izatifikethi, amaxabiso, njl.njl. Zonke zinokufana kwiphepha elinye loshishino liye kwelinye. Kwaye iyavakala loo nto!
Awukhohlisi ekubhaleni kwakhona umxholo ukuze uzenzele umntu owahlukileyo, yimeko eyamkelekileyo ngokupheleleyo ukuphinda umxholo. Nantsi ingcebiso yam, nangona:
Sebenzisa iiNqaku eziKhethekileyo zaMaphepha -Isihloko sam sephepha, ndisebenzisa lo mzekelo ungasentla, singabandakanya inkonzo kunye nomzi mveliso eli phepha lijolise kulo.
Sebenzisa iNkcazo yeMeta eyahlukileyo -Iinkcazo zeemeta zam ziya kwahluka kwaye zijolise kuzo.
Faka umxholo oModwa Ngelixa iindawo ezinkulu zekhasi zinokuphindwa kabini, ndingabandakanya ishishini kwimixholwana, kwimifanekiso, kwimizobo, kwiividiyo, kubungqina, njl njl.ukuqinisekisa ukuba amava ahlukile kwaye ajolise kubantu ekujoliswe kubo.
Ukuba wondla amashishini asi-8 ngenkonzo yakho kwaye uwafaka la maphepha asi-8 anee-URL ezizodwa, izihloko, iinkcazo zemeta, kunye nepesenti enkulu (isisu sam esingenayo idatha ngama-30%) yomxholo owahlukileyo, awuzukuqhuba nabuphi na ubungozi bokucinga kukaGoogle ukuba uzama ukukhohlisa nabani na. Kwaye, ukuba liphepha eliyilwe kakuhle elinamakhonkco afanelekileyo… ungabeka kwinqanaba kakuhle kuninzi lwazo. Ndingabandakanya iphepha lomzali ngesishwankathelo esityhala iindwendwe kumaphepha aphantsi kwishishini ngalinye.
Kuthekani ukuba nditshintsha nje amagama esiXeko okanye amaNgingqi ngokujolisa ekuJongeni?
Eminye yemizekelo emibi kakhulu yomxholo ophindaphindiweyo endiwubonayo ziifama ze-SEO ezithatha kwaye ziphindaphinde amaphepha kwindawo nganye yendawo imveliso okanye inkonzo esebenza kuyo. Ndisebenze neenkampani ezimbini zokuphahla ngoku ezazinabacebisi be-SEO bangaphambili abakha idolophu- centric amaphepha apho bavele endaweni yegama lesixeko kwisihloko, inkcazo yemeta kunye nomxholo. Khange isebenze… onke loo maphepha abekwe kwinqanaba ngendawo.
Ngenye indlela, ndibeka unyawo olufanayo oludwelise izixeko okanye izithili abazisebenzisayo, ndibeka iphepha lenkonzo elinemephu yommandla abawusebenzelayo, ndawathumela onke amaphepha esixeko kwiphepha lenkonzo… ndaza ... nenkonzo iphepha kunye nendawo yenkonzo yamaphepha omabini aphakanyiswe kwinqanaba.
Sukusebenzisa izikripthi ezilula okanye umxholo wokutshintsha iifama endaweni yamagama afanayo anje… ucela ingxaki kwaye ayisebenzi. Ukuba ndingumphahli ogubungela iidolophu ezili-14… ndingathanda ukuba ne-backlinks kunye nokukhankanywa kwiindawo zeendaba, iisayithi zamaqabane, kunye neendawo zoluntu ezalatha kwiphepha lam elinye lokuphahla. Oko kuyakundibeka kwinqanaba kwaye akukho mda kuninzi lwamagama aphambili edibanisa iinkonzo endinokuzibeka kwiphepha elinye.
Ukuba inkampani yakho ye-SEO inokukrola ifama enje, uGoogle angayibhaqa. Kuyakhohlisa kwaye, ekuhambeni kwexesha, kunokukhokelela ekubeni ufumane isohlwayo.
Ewe kunjalo, kukho ukungafani. Ukuba ufuna ukwenza iphepha elinendawo ezininzi ezinomxholo owahlukileyo kunye nomxholo ofanelekileyo kuwo wonke amava owenzele wona, ayilahlekisi leyo… yeyakho. Umzekelo unokuba kukhenketho lwedolophu… apho inkonzo iyafana, kodwa kukho itoni yomahluko kumava ngokwendawo enokuthi icaciswe kwimifanekiso kunye neenkcazo.
Kodwa uthini malunga noMxholo ophindwe kabini ongenatyala?
Ukuba inkampani yakho ipapashe ukukhutshwa kwemithombo yeendaba, umzekelo, eyenze imijikelezo yayo kwaye yapapashwa kwiindawo ezininzi, usenokunqwenela ukuyipapasha nakwindawo yakho. Sibona oku rhoqo. Okanye, ukuba ubhale inqaku kwindawo enkulu kwaye unqwenela ukuphinda ulipapashe kwakhona kwindawo yakho. Nazi ezinye zeendlela ezilungileyo:
Canonical Unxibelelwano lwe-canonical yinto yemethadatha kwiphepha lakho elixelela uGoogle ukuba iphepha liyimpinda kwaye kufuneka bajonge i-URL eyahlukileyo yemithombo yolwazi. Ukuba uku-WordPress, umzekelo, kwaye unqwenela ukuhlaziya indawo ekuyo i-Canonical URL, ungakwenza oku nge Uluhlu lwePlagi SEO iplagi. Yongeza imvelaphi ye-URL kwi-canonical kwaye uGoogle uya kuhlonipha ukuba iphepha lakho aliphindi kwaye imvelaphi ifanele ukuzukiswa. Ijongeka ngolu hlobo:
Phinda uqondise Olunye ukhetho kukuhambisa nje i-URL enye kwindawo onqwenela ukuba abantu bayifunde kunye neinjini zokukhangela kwisalathiso. Kukho amaxesha ngamaxesha okususa umxholo ophindwe kabini kwiwebhusayithi kwaye sithumele onke amaphepha asezantsi kwelona phepha liphezulu.
I-Noindex -Ukumakisha iphepha kwi-noindex kwaye ngaphandle kweinjini yokukhangela kuya kwenza ukuba injini yokukhangela ingalihoyi iphepha kwaye ligcine ngaphandle kweziphumo zeinjini yokukhangela. UGoogle ucebisa ngokuchasene noku, esithi:
UGoogle akacebisi ukuba kuthintelwe ukufikelela kwabakhasayo ukuphinda umxholo kwiwebhusayithi yakho, nokuba yeyifayile yeerobhothi.txt okanye ezinye iindlela.
Ukuba ndinamaphepha amabini aphindwe kabini, ndinokukhetha ukusebenzisa i-canonical okanye i-redirect ukuze nayiphi na i-backlinks kwiphepha lam idluliselwe kwelona phepha lilungileyo, nangona kunjalo.
Kuthekani Ukuba Umntu Ubile kwaye Uyayishicilela kwakhona iMxholo wakho?
Oku kwenzeka rhoqo kwiinyanga ezimbalwa kwindawo yam. Ndifumana ukukhankanywa kwisoftware yam ephulaphuleyo kwaye ndifumanisa ukuba enye indawo iyaphinda ipapasha umxholo wam njengowayo. Kuya kufuneka wenze izinto ezimbalwa:
Zama ukunxibelelana nesiza ngokusebenzisa ifom yoqhakamshelwano okanye i-imeyile kwaye ucele ukuba isuswe kwangoko.
Ukuba abanalo ulwazi lokunxibelelana, yenza isizinda kwi-Whois khangela kwaye uqhagamshelane nabafowunelwa kwirekhodi yabo yesizinda.
Ukuba banabucala kwizicwangciso zabo zedomeyini, nxibelelana nomboneleli wabo wokubamba kwaye ubazise ukuba umxhasi wabo wophula ilungelo lakho lokushicilela.
Ukuba abasayithobeli, nxibelelana nabathengisi bendawo yabo kwaye ubazise ukuba beba umxholo.
Fayile isicelo phantsi kwe UMthetho weDivital Millennium Copyright Act.
I-SEO imalunga nabasebenzisi, hayi iiAlgorithms
Ukuba ugcina nje engqondweni ukuba i-SEO imalunga namava omsebenzisi kwaye ayisiyo ialgorithm yokubetha, isisombululo silula. Ukuqonda abaphulaphuli bakho, ukwenza ubuqu okanye ukwahlula umxholo ukuze ubandakanyeke ngakumbi kunye nokufaneleka yinto elungileyo. Ukuzama ukukhohlisa ii-algorithms yinto eyoyikekayo.
Ukubhengezwa: Ndingumthengi kwaye ndinxibelelene nayo Inqanaba leZibalo.
tags: umanyanisoezakhaamaphepha esixekoiphepha lephephaukuphinda umxholophinda umxholo wesohlwayoyendawo seoIndawo esekwe kumaphephaindawo ezininziukujikelezainkolelonoindexuphando lwezinto eziphilayoUhlobo lokukhangela eziphilayoudidiUkuthumelaiirobhothi.txtSEOezona ndlela zilungileyoIntsomi yokoumxholo wobusela